Xildhibaano Mareykan ah ayaa warqad u diray Sisi oo ku dalabanayaan in la sii daayo maxaabiis… – Hagaag.com
Xildhibaano Mareykan ah ayaa warqad u diray Sisi oo ku dalabanayaan in la sii daayo maxaabiis…
Posted on 19 Oktoobar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Wargeys ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa qoray in xildhibaano ka tirsan Xisbiga Dimuqraadiga ay warqad u direen Madaxweynaha Masar Abdel Fattah El-Sisi oo ay ku dalbanayaan in la siidaayo maxaabiis ay sheegeen in si cadaalad daro ah loogu xiray, iyagoo ka digay in aan loo dulqaadan doonin xadgudubyada haddii Joe Biden uu ku guuleysto madaxtinimada.
Wargeyska “Washington Post” ayaa soo wariyay in xildhibaano ay ku soo dareen warqadooda faahfaahinta maxaabiista la sheegay inay ku jiraan xabsiga sababo ay ku tilmaameen “cadaalad daro”, iyagoo muujiyay walaacooda ku saabsan faafida cudurka Coronavirus (Covid-19) ee xabsiyada Masar.
Sharci-dajiyayaasha oo 56 Dimuqraadi ah, oo uu ka mid yahay Senator Bernie Sanders oo madax-bannaan – ayaa ka digay in Dimuqraadiyiintu aysan u dulqaadan doonin xadgudubyada xuquuqda aadanaha haddii Joe Biden uu ku guuleysto madaxweynenimada.
Warqadda ayaa ka hadlaysa in ka badan 20 maxbuus – oo ay ku jiraan kuwa u dhaqdhaqaaqa xuquuqda, qareenno, kuwa siyaasadiisa ka soo horjeeda iyo suxufiyiin – waxaana lagu sheegay in si caddaalad darro ah loogu xiray iyagoo keliya adeegsadeen xuquuqdooda aasaasiga ah, liiska waxaa ku jira u ololeeyaha siyaasadeed Rami Shaath, kaasoo muddo ka badan hal sano xabsi ku jira, iyo u ololeeyaha Qibdhiga Rami Kamal.
Sharci-dajiyayaashu waxay sheegeen in tiro muwaadiniin Mareykan ah ay ku xiran yihiin Masar, oo uu ku jiro walaalka macallimada Pennsylvania, Reem Muhammad al-Desouki, waxayna codsadeen in la sii daayo.
Mas’uuliyiinta Masar waxay xireen Reem El Desouki, ka dibna waxay ku laabatay Mareykanka kadib markii la siidaayay bishii May ee la soo dhaafay, laakiin walaalkeed ayaa la xiray markii uu ku soo booqday iyada intii ay ku jirtay xabsiga.
Xubin ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee Aqalka Wakiilada Ro Khanna ayaa sheegtay in fariinta ay sabab u tahay olalaha ciidamada amaanka ee ka dhanka ah dhaqdhaqaaqayaasha iyo mucaaradka iyo xariga in ka badan 900 oo qof kadib mudaharaadyadii dhawaan looga soo horjeeday Siisi.